ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: "Happiness is my fundamental desire..."
"Happiness is my fundamental desire..."
ညချစ်သူ | 11:34 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ညချစ်သူ | 11:34 PM |
စိတ်ချမ်းသာမှုကို တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပထမဦးစားပေးရမယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဘေးဖယ်မထားရဘူး။
ကိုယ်လိုချင်တာ ရမှ စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ တွေးရင်
စိတ်ချမ်းသာမှုထက် လိုချင်တဲ့အရာကို ပိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်။
အဲဒီလိုလူဟာ သူ လိုချင်တာရလည်း စိတ်ချမ်းသာမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လိုချင်တာတစ်ခုရပြီးရင် နောက်ထပ် ဒီထက်ကောင်းတာကို လိုချင်ဦးမယ်။
လိုချင်တာ ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားရှိမှ
စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရမယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
စိတ်ချမ်းသာမှုမှာ condition မရှိမှ စိတ်ချမ်းသာမယ်။
ဒီအချက်ကို သေသေချာချာ သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်။
Happiness is my fundamental desire.
စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ ငါ့ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အလိုဆန္ဒပဲ။
အဲဒါ အရင်ရပြီးမှ ကျန်တာကို လိုချင်တယ်။
ထမင်းကို အရင်စားပြီးမှ ကော်ဖီ သောက်မယ်လို့ ဆိုသလိုပဲ။
ထမင်းစားပြီး ကော်ဖီမသောက်ရလည်း အရေးမကြီးဘူး။ နေလို့ရတယ်။
ထမင်းမစားပဲ ကော်ဖီပဲ အမြဲသောက်နေလို့တော့ မရဘူး။
ကိုယ်လိုချင်တာကို တိတိကျကျ သိရင် အဲဒါကို မျက်ခြေ မပြတ်စေနဲ့။
လိုရင်းကို မျက်ခြေပြတ်သွားလို့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို မရတာ။
တခြားကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးတာ များလွန်း သွားရင်စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်
ငါ စိတ်ချမ်းသာအောင် မနေရသေးပါလားလို့
‘ ငါ စိတ်ချမ်းသာမှ သူများတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် သူများတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် မလုပ်ခင် ငါက အရင် စိတ်ချမ်းသာအောင် နေရမယ်’
ဒီလိုတွေးရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရာ ရောက်ပါသလား။
ကိုယ်က စိတ်ဆင်းရဲနေပြီး သူများ စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးမှ စိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့ ဆိုမှာလား။
အဲဒီလို တွေးတာဟာ ကွေ့ကောက်လမ်းမှားနေတဲ့ တွေးနည်းပဲ။
မိမိကိုယ်ကို ပထမ သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ ထားရမယ်လို့ ဘုရားဟောပါတယ်။
တရားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရင်တော့ ကိုယ်က အကျင့်သီလရှိအောင် အရင်နေရမယ်။
ကိုယ်က တရားကိုသိအောင် အရင်လုပ်ရမယ်။နောက်မှ သူများကို ဆုံးမရမယ်လို့ ပြောတာ။
ဆင့်ပွား အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရင် ကိုယ်က အရင် စိတ်ချမ်းသာအောင် နေပြီးမှ သူများကို
စိတ်ချမ်းသာအောင် တတ်နိုင်တာ ပြောပေး၊ လုပ်ပေးရမယ်။
သူများ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကိုယ်က စိတ်ဆင်းရဲခံမှ ကောင်းတယ်။
အဲဒါမှ ချစ်ရာရောက်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်မခံဘူး။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့ ထင်ရင်လည်း ရတယ်။
သူများကို နစ်နာအောင် လုပ်ပြီးမှ ကိုယ်က စိတ်ချမ်းသာဖို့တော့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အတွက် သူများ စိတ်ဆင်းရဲနေတာကို ကြိုက်သလား။
သတိထားပါ။ အဲဒီလို ဆိုရင် သူ့အတွက်လည်း ကိုယ်က စိတ်ဆင်းရဲမှ ဖြစ်တော့မယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် စိတ်ဆင်းရဲနေရင် ကိုယ်ပါ စိတ်ဆင်းရဲမှ သူ စိတ်ချမ်းသာမှာလား။
အဲဒီအတွေးအခေါ် သဘောထား မျှော်လင့်ချက်ဟာ မှားနေတယ်။
သူ စိတ်ချမ်းသာအောင် အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်လည်း စိတ်ဆင်းရဲဟန်ဆောင်တတ်တယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအရ စိတ်ဆင်းရဲဟန်ဆောင် ကြတယ်။
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်လေ သဘာဝမကျလေပဲ။
လူများစုဟာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စိတ်ချမ်းသာမှု သုတေသနလုပ်ကြည့်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့တွေရှိချက်က
လူဦးရေရဲ့ ၆၀%ပဲ ပျော်တယ်လို့ သိရတယ်။
၂၅% စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ စိတ်ချမ်းသာမှု သုတေသန ……?
စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုရင်းပါ (ဆရာတော် ဦးဇောတိက) စာအုပ်မှ
Posted by ညချစ်သူ at 11:34 PM